ကောင်လေးငယ်ရဲ့ အိမ်ကလေး: 2011
မင်းကို "ချစ်တယ်" ဆိုတာထက်..
နင့်ကနဲ့ နင့်ကနဲ့ ဆို့ကနဲ့ ဆို့ကနဲ့.....
ကြေမွသွားတဲ့ ငါ့နှလုံးသားရဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေက...
မင်းကို " နာကြီးမုန်းတီးမိတယ်" ဆိုတဲ့စကားကို
နှလုံးသားရဲ့ ဟန့်တားမှု တံခါးတစ်ခုက..
" ဒါတွေဟာ အမှန်တွေပါ "တဲ့....................။
Posted by wai da nar at 12/05/2011 01:23:00 PM 1 comment:
The opportunity for doing mischief is found ahundred times aday , and of doing good onceayear. (Voltaire)
အကျိုးမရှိတဲ့ ပေါက်ပန်းဈေးအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ကျတော့ အခွင့်အလမ်းက တစ်နေ့ အကြိမ်တစ်ရာတွေ့ရတယ်။ ကောင်းတာလုပ်ဖို့ကျတော့ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပဲတွေ့ရတယ်..။(ဗော်လ်တိုင်းယား)
အဒီနေ့ဖို့ အချည်းနှီး အလဟသပါပဲ။
စိတ်ဆိုတာ မကောင်းမှုကိုပိုပြိးပျော်မွေ့တတ်တာမို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုပဲထိန်းပါ။
အကျိုးမဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိစေဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးပါ။
သင့်ဘဝရဲ တိုးတက်မယ့်အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးနေတာဟာ
Chance is the word void of sense , nothing can exist withoutacause. (Voltaire)
ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ အခြေခံအကြောင်းရင်းမရှိဘဲ ဘယ်အရာမှာအလိုလို ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ပါဘူး။
အခွင့်အရေးဆိုတာ လူက ထိုင်ပြီးစောင့်နေလို့ပေါ်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
အရိပ်လာမှာကိုနေပူက စောင့်နေရုံနဲ့ ဘယ်ပြီးမလဲ။
အခွင့်အရေးဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုရဲ့ ရလဒ်အသီးအပွင့်သာဖြစ်တယ်။
လောကမှာ ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ ဘာမှအလိုလိုဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ပါ။ ...........
The decline of literature indicates the decline ofanation. (Geothe)
စာပေယိုယွင်းကျဆင်းခြင်းဟာ အမျိုးသားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းခြင်းရဲ့ ဖေါ်ပြချက်ဖြစ်တယ်။ (ဂိုဆေး)
ဒီလိုပါပဲ စာပေလေ့လာဖက်ရှုမှု ပညာရှာမှီးသူဟာလည်း
Posted by wai da nar at 11/23/2011 09:42:00 PM No comments:
မငိးကို မမြငိစေချင်ဘူး ချစ်သူ......။
ငါမင်း ကို အဖြူရောင်သက်သက်နဲ့
ငါ မင်းအတွက် ပေးဆက်သူသက်သက်
ချစ်ခြင်းများစွာနဲ့ ချစ်ခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ..... ချစ်သူ..။
နောက်ဘဝတွေကိုတော့ ငါ မပြောတက်ဘူး
မင်းတစ်ယောက်တည်းပဲ ချစ်သွားမှာပါ... ချစ်သူ.....။
လှည့်ကွက်တွေကို ငါ မသိသလို သိသလိုနဲ့
ပြုံးမလိုနဲ့ မဲ့သွားတဲ့ ငါ့မျက်နှာမှာ
မျက်ရည်တောင် စို့ခဲ့ရတယ် ချစ်သူ..............
မင်းအတွက်ကျခဲ့တဲ့ ငါ့ရဲ့ မျက်ရည်စက်တွေကို
ငါ့လက်နဲ့ မသုတ်ဘူး ချစ်သူ.............။
ကျပါစေ မြေသို့ထိသာ.............. ။
ငါဟာ ကျဆုံးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတာ
တည်မြဲခြင်း ၊ မပြောင်းလဲခြင်း မရှိပါဘူး ချစ်သူ....
မတည်မြဲခြင်း ၊ ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့
လူတိုင်း ယုံကြည်ကြတယ် ၊ လူတိုင်းယူဆကြတယ်....................။
အဲဒီလူတိုင်းရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ ၊ ယူဆချက်တွေအပေါ်
Posted by wai da nar at 11/22/2011 01:04:00 AM No comments:
I have found some of the best reason I ever had for remaining at the botton simple
by looking at the top. ( Frank Colby ).
ကျနော်တို့ အောက်ဆုံးအခြေမှာရှိနေခဲ့ရတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်းတချို့ ထိပ်ဖျားစီမျှော်ကြည့်ရင်းက စူးစမ်းတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ (ဖရန့်ကိုဘီ)
Beauty and wisdom are realy conjoined. ( Petronius Arbiter)
လှပါမှုရယ် ...ဥာဏ်ပညာရယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အတူတွဲနေရိုးမရှိပါ။ (ပက်ထရိုနီးယပ်စ် အာဘစ်တာ၊ရောမစာရေးဆရာ)
ဒါကြောင့် ဥာဏ်ပညာဆိုတာ ရုပ်ရည်အပေးမှာ မတည်ဘူးဆိုတာသတိပြုပါ..။
Interest isthe grate mainspring of concentration arouse your interest sufficiently and concentration ceases to beaproblem. (Norman C.Croame)
စိတ်ပါဝင်စားမှုဟာ အာရုံစူးစိုက်မှုရဲ့ အဓိကဖြစ်တယ်။ စိတ်ပါဝင်စားမှုကိုသာ လုံလောက်အောင် နှိုးဆွပေးပါ။ အာရုံစူးစိုက်မှုက အလိုလို အဆင်ပြေချောမွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ (နော်မန်စီကရိန်း)
မိမိလုပ်ငန်းအပေါ် မိမိစိတ်ဝင်စားခြင်းဟာ အောင်မြင်မှုရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိတဲကအလုပ်ကို လုပ်နေရင် အဲဒီလူဘဝဟာ ဘယ်တော့မှာပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်သလို အောင်မြင်မှုလည်းမရနိုင်ပါ.။
If you don't want anyone to know, don't do it. (Chinese Proverb)
သင်လုပ်မဲ့ကိစ္စကို သူတစ်ပါးမသိစေချင်ရင် အဲအလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့..။ (တရုပ်စကားပုံ)
Posted by wai da nar at 11/20/2011 12:58:00 PM No comments:
မလျှော့တဲ့ ဇွဲ ၊ လုံးလနဲ့...
Posted by wai da nar at 11/20/2011 09:16:00 AM No comments:
ဆရာတော် ဦးဇောတိက (တစိမ့်စိမ့်တွေးမယ် သိစရာတွေးစရာ) ထဲမှစာစုလေးများ
၁၊ ဘဝဆိုတာ စိတ်နဲ့ တန်သလိုဖြစ်တာ။
၂၊ အလေးနက်ဆုံးအသိဥာဏ်က ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသိဥာဏ်ပဲ။
၄၊ မနေ့က ငါထက် ဒီနေ့ငါက ပိုပြီးစိတ်ထားကောင်းမှသာ ငါ့ဘဝကို ငါကျေနပ်နိုင်မယ်။
၅၊ မေတ္မာကြီးမားတဲ့သူဟာ မြင့်မြက်တဲ့သူ ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
၆၊ သူများမှားလို့ကိုယ်ခံရတာထက် ကိုယ်မှားလို့ ကိုယ်ခံရတာက ပိုပြီးတော့ဆိုးပါတယ်။
၇၊ သူများအပြစ်ကိုများများရှာပြီးပြောနေတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကို ကိုယ်ချတာပဲ၊
သူများကို ဂုဏ်သိက္ခာချပြီးမှ ကိုယ့်ဂုဏ်ကို တင်လို့ရမယ့်ဘဝကိုရောက်နေပြီ။
၈၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် သဘောထားမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
၉၊ စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိပဲနဲ့ စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုမရှိဘူး။
၁၀၊ ချစ်တက်ကိုယ်ချင်းစာတက်တဲ့သူဟာ အဖေါ်မဲ့အထီးကျန်ခံစားမှုဖြစ်တာ နဲတယ်။
၁၁၊ တရားမျှတမှုကို တန်ဖိုးထားမှာသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။
၁၂၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုကောင်းအောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြုပြင်နိုင်တာဟာ
ကိုယ့်ရဲ့အကြီးမားဆုံး စွမ်းရည်သတ္တိကို (Power)ဖြစ်တယ်။
၁၃၊ အသိဥာဏ်နဲ့ စိတ်မြင့်မြက်မှုရှိမှ စိတ်ကျန်းမာမယ်။
၁၄၊ ပျော်ဖို့ထက်ဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနေဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။
၁၅၊ လူဖြစ်ရုံနဲ့ လူဖြစ်ကျိုးမနပ်သေးဘူး၊ မြင့်မြက်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်
၁၆။ အမှန်တရားသည်ပင်လျှင် အမြင့်ဆုံးဘာသာတရားဖြစ်သည်။
၁၇၊ မျှတတဲ့ သဘောထားရှိရင် မှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရနိုင်ပါတယ်။
၁၈၊ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတာနိမ့်နေရင် နိမ့်တဲ့ဘဝမျိုးကိုပဲ ပုံဖေါ်မိမယ်။
၁၉၊ ပျော်ပျော်နေပါ ၊ ပေါ့ပေါ့တန်တန်မနေပါနဲ့။
၂၀၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ့
Posted by wai da nar at 11/04/2011 11:50:00 PM No comments:
ကျနော်ဒီဘလော့လေးကို ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ထားရတာပါ..။ ဘာမသိညာမသိနဲ့ ဖွင့်ရတော့ ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားလို့... ဟိဟိ... ကျနော် ဘလော့ကိုဖွင့်ချင်လွန်းလို့ တင်ချင်လွန်းလို့ နေ့တိုင်းညတိုင်း ဒီဘလော့ကိုပဲ ဝင်ဝင်ပြီးတော့ လိုက်ကြည့်နေတာ.. ကိုယ့်ဘလော့က သူများဘလော့တွေလိုမဟုတ်တော့ (အလကားရထားတဲ့ဘလော့လေ) ဒီဘလော့ဂါက မလုပ်တက်လုပ်တက်နဲ့ရှောက်လုပ်နေ တယ်လို့ပြောခံရမှာလည်းကြောက်တယ်. စာလည်းတယ့်ရာတွေတင်နေတယ်လို့လည်းပြောခံရမှာကြောက်တယ်.(သေချာပေါက်ပေါ့)
တက်နိုင်ဘူးလေ ပြောတော့လည်းပြောခံရလိုက်ပါ့ ဟုတ်ဘူးလား.. နောက်ကျမှ အဆင်ပြေသလိုကြည့်လုပ်ရမှာဘဲ... ကျနော်ကအမှန်တကကယ်တော့ ကိုယ်သိတာလေးတွေကို ကိုယ့်ထပ်မသိသေးတဲ့သူတွေကိုသိစေချင်တာပါ.. အဲဒါကြောင့်ဘလော့ကိုဖွင့်ခဲ့ရတာပါ..။
ကျနော်တို့အညာမှာဆို အင်တာနက်ဆိုတာဘာမှတောင်မသိကြဘူးလေ (ကျနော်လည်းပါတယ်)
ကျနော်လည်း မလေးရှားကိုရောက်မှ အင်တာနက်ဆိုတာ ဒါကြီးပါလားလို့ဆိုပြီးတော့သိရတာပါ...
အင်တာနက်မှာက ကိုယ်သိချင်တဲ့အကြောင်းရာတွေကိုသိလို့ရတယ်.. ကိုယ်မမြင်ဖူးတဲ့ အရာတွေကိုလည်း မြင်ဖူးရတယ်လေ။ ကိုကတော့သိသွားပြီိုမသိသေးတဲ့သူတွေကိုလည်း သိစေချင်တယ် တက်စေချင်တယ်လေ.. ဒါမှ အားလုံးသိမှာတက်မှာ..... ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လို့မဖြစ်ဘူးလေ..တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တက်တဲ့သူဟာ အထီးကျန်တက်တယ်..
နောက်ပိုင်း မလေးကနေပြန်သွားလို့ မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရင် ကိုယ့်ဘလော့လေးမှာ ဒီထပ်မက post တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လဲ ယုံကြည်တယ်.. ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့လဲ စိတ်ထဲမှာ ဆုံးဖြက်ထားတယ်.. အဲဒါကြောင့် ကျနော့်ရဲ့ဘလော့လေးကို ဝိုင်းဝန်းကူညီ အားပေးကြပါအုံးလို့ တိုက်တွန်းရင်း...
Posted by wai da nar at 11/04/2011 09:52:00 PM No comments:
ကျနော့်ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ.. ကျနော် Blog ကိုအရမ်းတင်ချင်လွန်းလို့
နောင်တစ်ချိန်မှာ ကျနော့်၏Blogသည် ရောက်လာသူအပေါင်းကို ကောင်းခြင်းအဖျာဖျာနှင့်ပြည့်စုံခြင်း
ကိုယ်စိတ်နှစ်လုံးရွှင်ပြုံးခြင်း ဖြစ်အောင်ကျနော်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျနော်ယုံကြည်ထားသူတစ်ယောက်ပါ.. ထိုကြောင့် ကျနော်အား အဖက်ဖက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့(ဘာမှမတက်၍)အနုညွတ်တောင်းခံအပ်ပါသည်။
Posted by wai da nar at 11/02/2011 07:47:00 AM 1 comment:
ဆရာတော် ဦးဇောတိက (တစိမ့်စိမ့်တွေးမယ် သိစရာတွေးစရ...